Fampiharana: Ity kitapo fanampiana voalohany ity dia tsara ho an'ny fampiasana isan'andro na fanaovana traikefa an-tsokosoko, ao anatin'izany: trano, birao, toby, fiara, trano fisakafoanana, fiara fitaterana, fanatanjahan-tena, sambo, fitsangatsanganana an-dalambe, toeram-piasana sy sekoly sns.
Size: 19 x 10 x 13cm, na fanaingoana
Ny kit vonjy taitra voalohany, na miantso ny kitapom-bolongana, dia misy karazany maro ary fenoina fitaovana maika hamonjy anao! Avy amin'ny kitapom-batana ka hatrany amin'ny sehatra manokana ny kitam-bola vonjy taitra voalohany dia 19x10x13cm, mora be ary entina any an'efitra na iainana miaina. Ny kitapo vonjy taitra dia afaka mamorona ampahany amin'ny kitapitr'afo na kitapitr'a velona kely ankoatra ny fitaovana hafa, fitaovana fiarovana manokana, fitaovana ary fitaovana.
Azontsika atao ny manonta ny vatofanao amin'ny vatanao, na manjaitra marika famantarana ao anatiny ao.
OEM & ODM dia misy serivisy ho an'ny idealy famolavolana vaovao, na manaova fanovana sasany amin'ireo endritsika efa misy. Aza misalasala mifandray aminay eto.
Kitapo foana fotsiny ity vokatra ity, tsy misy fitaovana ao anatiny.
F3: Ahoana ny amin'ny fandoavam-bola tenyS?
A4: 5 000 isan'andro fivoahana, ny fotoana fandefasana dia 35 ~ 50 andro, izay miankina amin'ny vokatra sy ny filaharan'ny baiko, manana milina zaitra an-jatony izahay hanohanana ny fivoarana sy ny fandefasana haingana.
A7: MOQ dia 500. Ary koa, andramo miaraka aminay raha misy tahiry misy azo alefa haingana.
Manana ekipa R&D matanjaka izahay hanohana ny fampandrosoana, toy ny fisafidianana fitaovana isan-karazany, fametahana loko, famolavolana sary & fitaovana ho an'ny mpamorona, famolavolana fonosana anatiny, santionany, azafady azafady mifandraisa aminay amin'ny antsipiriany.
Manaraka: FFP2 NR FIZARANA SORATRA MASINA
Kitapo vonjy taitra vonjy maika
Kitapo fanampiana fanampiana voalohany
Kitapo fanampiana vonjy maika ao amin'ny hopitaly
Kitapo vonjy maika ho an'ny hopitaly
Kitapo fanampiana vonjy aina voalohany